Mpanao Gazety Shinoa Nosamborina Rehefa Avy Namoaka Raharahanà Kolikoly Tao Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Mpanao Gazety Shinoa Nosamborina Rehefa Avy Namoaka Raharahanà Kolikoly Tao Amin'ny Aterineto
Voadika ny 27 Oktobra 2013 0:35 GMT
Vakio amin'ny teny polski, বাংলা, Português, srpski, Français, Español, Italiano, English
Nosamborina [anglisy] tamin'ny fomba ofisialy ilay mpanao gazety antsoina hoe Liu Hu rehefa avy niampanga tompon'andraikitra ambony ho nanao kolikoly fito herinandro taorian'ny fanagadrana azy tamin'ny 24 Aogositra 2013.
Nangatahan'i Liu, avy ao amin'ny gazety New Express ao Guangzhou tamin'ny 29 Jolay, , amin'ny alalan'ny kaontiny ao amin'ilay habaka malaza Sina Weibo, ny hanaovana fanadihadiana an'i Ma Zhenggi, tale lefitry ny Fitantanam-panjakana momba ny indostria sy ny varotra. Azavain'i Liu ao amin'ny lahatsorany ny antsipirihan'ny kolikoly voalaza fa nahasaringotra mpiasam-panjakana ambony efatra.
Notànana izy nanomboka hatreo satria nahiahiana ho “namorona sy nanaparitaka tsaho”, ary voafafa ny kaontiny tao amin'ny Sina Weibo nandritra ny fanagadrana azy.
Ny fisamborana an'i Liu Hu no famoretana farany niseho manoloana ireo feo mitsikera ao amin'ny media sosialy Shinoa. Nampitandremana sy nogadrain'ny polisy ireo olo-malaza ambony liberaly ao amin'ny Weibo tao anatin'zay volana vitsy lasa izay. Tamin'ny volana septambra 2013, nogadrain'ny polisy tao Beijing ilay mpiserasera malaza ao amin'ny aterineto Charles Xue [anglisy] satria voarohirohy ho nandrisika fivarotan-tena.
Maro ireo mpanao gazety sy mpisolovava no mino fa tsy meloka i Liu. Nisy ireo tezitra noho ny fisamborana an'i Liu satria nafangaron'izy ireo tamin'ny mpanao gazety hafa, Luo Changping izy, izay nanao fiampangana ampahibemaso an'i Liu Tienan tahaka izany ihany koa tamin'ny taona 2012, izay tale lefitra ao amin'ny vaomiera nasionaly momba ny fampandrosoana sy ny fanovana. Noesorina tamin'ny asany ilay mpiasam-panjakana tamin'ny farany.
Liu Hu, mpanao gazety nosamborina rehefa avy namoaka tranganà kolikoly tao amin'ny aterineto. Sary avy amin'ny Sina Weibo.
Na dia eo aza ny fahatezeram-bahoaka, nampangina ireo feo tsy manaiky tao amin'ny aterineto ny fampitahoran'ny famoretana. Novalian'ireo mpamaky mpanohana ny antoko, izay ahiahiana ho mpaneho hevitra nokaramain'ny governemanta shinoa, fantatra amin'ny anarana hoe Antoko 50 Cents [anglisy], ireo hafatra vitsivitsy antserasera manohana an'i Liu.
Mpanao gazety monina ao Lanzhou nanontany [zh] ny anton'ny nahaverezan'i Liu ny fahalalahany:
Tsy fivarotan-tena, tsy tsaho, tsy soloky, na zava-dratsy hafa natao, tsotra fotsiny satria ny kaonty bilaogy madinika dia mampibaribary ireo kolikoly ahiana ho nataon'ireo tompon'andraikitra ambony, ka nosamborina izy noho ny fanankorontana filaminam-bahoaka izay mety hampitera-doza ny fiarahamonina. Tena matahotra marina ve ianareo? Fantatrareo ve fa izao karazana fitondra-tena izao dia sokajiana ho hadalana. Satria tsy miahy fotsiny ny amin'ny famotsorana an'i Liu Hu izahay, fa ireo antony nahavery ny fahalalahany ihany koa!
Nosomparan'ireo “mpiserasera hafa” tsy mitovy hevitra haingana ny lahatsoratra nosoratany, izay novaliany [zh] hoe:
Mba nanoratra lahatsoratra manohana an'i Liy Hu fotsiny aho, saingy nototofan'ireo fanehoan-kevitra marobe avy amin'ny Antoko 50 Cents.
Mpiserasera hafa Hu Ning namerina [zh] hoe:
Vao avy tafiditra tamin'ilay lohahevitra mafana “nosamborina i Liu Hu” aho, saingy avy amin'ireo anarana hafahafa, tsy misy fanamarinana avokoa ireo fanehoan-kevitra rehetra mikasika izany. Maro ireo kaonty no tsy ahitana sarintava akory. Mahagaga ihany koa fa mifampitohy ireo fanehoa-kevitra, izay nampangovitra ahy.
Nikisaka nankany amin'ny sehatra media sosialy hafa ireo mpiserasera sasany. Mpisolovava Zhou Lixin nanadihady [zh] izany tao amin'ny bilaoginy:
Raha ny marina, manimba ny endriky ny antoko sy ny firenena ny fihetsiky ny polisy tao Beijing. Voalohany, tsy nanome antoka izy ireo fa tsy meloka ilay tompon'andraikitra ambony. Faharoa, niampanga mpanao ampamoaka tsy nampandalovina fitsarana izy ireo. Milaza hafatra amin'ny olom-pirenena izany fihetsika izany: fa na mpanao kolikoly ireo tompon'andraikitra ambony na tsia, tsy afaka miampanga azy ireo amin'ny aterineto ianao, ary izay rehetra sahy na mirisika hanao izany dia hiafara any am-ponja tahaka ilay mpanao gazety Liu Hu.
Tao amin'ny Twitter, “电车痴汉 ‏‪@mrlaoyang” nanoratra hoe:
Manaporofo araka izany ny fisamborana an'i Liu Hu fa manana olona matanjaka ao ambadika ny tale lefitra amin'ny fitantanam-panjakana momba ny indostria sy ny varotra.
Mpiserasera hafa, Lily Lee [zh] naneho ny fisalasalany mikasika ny fahavononan'ny governemanta hiady amin'ny kolikoly :
Misambotra mpanao gazety tahaka izany izy ireo ary mihevitra fa manana ny rariny, ka mahatonga hanontany raha miady amin'ny kolikoly marina ny governemanta na tsia.